အမည်တွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြောင်းလဲချက် စာရင်းများပေါ်တွင် ပေါ်ထင်မှု
OAuth CID: 1841 PAWS [2.1] PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၁၈၉၄ ခု
mobile edit မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်းဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု (ဝက်ဘ် သို့ app) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၀၉၉၉ ခု
mobile web edit မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၅၉၅၈ ခု
visualeditor မျက်မြင် တည်းဖြတ် Edit made using the visual editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၇၀၀၂ ခု
mobile app edit မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်း app မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၅၄၃၅ ခု
advanced mobile edit အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ် အဆင့်မြင့်ပုံစံနှင့် အသုံးပြုသူမှ တည်းဖြတ်ထားသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၀၃၁၂ ခု
android app edit အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ် Edits made from mobile app for Android ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၉၂၂၀ ခု
discussiontools-added-comment (ဝှက်ထားသော) A talk page comment was added in this edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၆၁၉ ခု
mw-new-redirect ပြန်ညွှန်းအသစ် Edits that createanew redirect or changeapage toaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆၇၈၂ ခု
visualeditor-wikitext ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ် Edit made using the 2017 wikitext editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆၆၀၅ ခု
mw-reverted နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး Edits that were later reverted byadifferent edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၆၅၅ ခု
wikieditor (ဝှက်ထားသော) Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၉၁၀ ခု
mw-undo နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that undo previous edits using the undo link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၁၈၆ ခု
contenttranslation ContentTranslation အကြောင်းအရာ ဘာသာပြန်ခြင်း ကိရိယာကိုသုံး၍ အခြားဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၇၆၆ ခု
mw-rollback နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that roll back previous edits using the rollback link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၂၈၄ ခု
visualeditor-switched Visual edit: Switched User started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၁၈၁ ခု
contenttranslation-v2 ContentTranslation2 အကြောင်းအရာ ဘာသာပြန်ခြင်း ကိရိယာဗားရှင်း ၂ ကိုသုံး၍ အခြားဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၆၈၇ ခု
ios app edit iOS app edit အိုင်အိုအက်စ်အတွက် မိုဘိုင်း app မှ တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၆၂၈ ခု
mw-changed-redirect-target ပြန်ညွှန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် Edits that change the target ofaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၄၄၄ ခု
mw-manual-revert လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that manually restore the page to an exact previous state ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၀၈၂ ခု
mw-replace အစားထိုးခဲ့သည် Edits that remove more than 90% of the content ofapage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၁၁ ခု
discussiontools (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်ခြင်း ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆၈၀ ခု
mw-blank ဗလာပြုလုပ်ခြင်း စာမျက်နှာတခုအား ဗလာပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၄၁ ခု
mw-removed-redirect ပြန်ညွှန်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည် Edits that change an existing redirect toanon-redirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၁၈ ခု
discussiontools-reply အကြောင်းပြန်ရန် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို ပြန်ကြားခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၁၁ ခု
discussiontools-source ရင်းမြစ် DiscussionTools သည် ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၄၉၃ ခု
discussiontools-source-enhanced (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbar ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၅၀ ခု
massmessage-delivery MassMessage delivery Message delivery using Extension:MassMessage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၁၆ ခု
OAuth CID: 1805 SWViewer [1.4] App to monitor the recent changes ofawiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၈၂ ခု
discussiontools-visual မျက်မြင် DiscussionTools သည် မျက်မြင်တည်းဖြတ် ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၈၇ ခု
discussiontools-newtopic အကြောင်းအရာအသစ် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုကို စာမျက်နှာသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၆၉ ခု
disambiguator-link-added သံတူကြောင်းကွဲ လင့်ခ်များ သံတူကြောင်းကွဲစာမျက်နှာများသို့ ပေါင်းထည့်ထားသောလင့်ခ်များအား တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၄၄ ခု
emoji အီမိုဂျီ Used by global abuse filter 110. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၃၆ ခု
OAuth CID: 1352 SWViewer [1.3] App to monitor the recent changes ofawiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၉၇ ခု
newcomer task လူသစ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ Edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၈၈ ခု
OAuth CID: 1804 IABotManagementConsole [1.2] A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run onaset of articles. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၄၉ ခု
blanking ဗလာပြုလုပ်ခြင်း ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၇ ခု
help panel question အကူအညီစားပွဲ မေးခွန်း Edit made from the help panel's postaquestion feature ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၅ ခု
T144167 T144167 ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၄ ခု
ဗလာပြုလုပ်ခြင်း ဗလာပြုလုပ်ခြင်း ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၁ ခု
campaign-external-machine-translation campaign-external-machine-translation ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၀ ခု
OAuth CID: 1261 SWViewer [1.2] App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]]. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု
newcomer task copyedit Newcomer task: copyedit "Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၄ ခု
possible libel or vandalism possible libel or vandalism ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု
fileimporter-remote Modified by FileImporter Edits made by the FileImporter extension after successfully importingafile from this wiki. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု
OAuth CID: 429 PAWS [1.2] PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online viaaJupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု
OAuth CID: 593 CropTool [1.4] Tool for cropping images ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု
OAuth CID: 1188 SWViewer [1.0] SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]]. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု
meta spam id meta spam id ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု
possible vandalism possible vandalism အသုံးမပြုတော့ပါ မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၁ ခု
OAuth CID: 678 IABotManagementConsole [1.1] A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run onaset of articles. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁ ခု
newcomer task references Newcomer task: references "References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁ ခု
mw-contentmodelchange မာတိကာမော်ဒယ် ပြောင်းလဲမှု Edits that change the content model ofapage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
mw-server-side-upload Server-side upload Media files that were uploaded viaamaintenance script ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
centralnotice Central Notice Edit created via the CentralNotice Admin UI ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
centralnotice translation Central Notice Translation Edit of CentralNotice content created via the Translate extension ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
visualeditor-needcheck Visual edit: Check Edit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
sectiontranslation အပိုင်းလိုက်ဘာသာပြန်မှု The content was translated fromasection in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
autobiography autobiography ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
coi-spam coi-spam ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
disneynew disneynew ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
OTRS permission added by non-OTRS member OTRS permission added by non-OTRS member ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
repeated xwiki CoI abuse repeated xwiki CoI abuse ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
abusefilter-condition-limit condition limit reached Edits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help). ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
discussiontools-edit ပြင်ဆင်ထားသော သုံးသပ်ချက် အသုံးပြုသူသည် ရှိနှင့်ပြီးသော သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို DiscussionTools ဖြင့် တည်းဖြတ်ခဲ့သည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
help module question Help module question Edit made from the homepage help module's "Askaquestion" feature ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မလုပ်ပါ ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
mentorship module question Mentorship module question Edit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" feature ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
mentorship panel question Mentorship panel question Edit made from the help panel's "Ask your mentor" feature ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
newcomer task image suggestion Suggested: add images "Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
newcomer task add link Suggested: add links "Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
newcomer task update Newcomer task: update "Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
newcomer task expand Newcomer task: expand "Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
newcomer task links Newcomer task: links "Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၀ ခု
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:စာတွဲများ" မှ ရယူရန်